Banika Nabanye Izinto Abazikhupheleyo
Nangona abantu baseCuba bengenayo bonke i-Intanethi, inkampani yeefowuni iye yayifaka kwiivenkile zayo. Sekunjalo, amaxabiso ayo asephezulu. Ngenxa yoko, ukuze kuncedwe abazalwana ukuba nabo bafumane izinto ezikwi-jw.org, isebe lakhuthaza amabandla ukuba abe nomvakalisi oza kuya kwenye yezo venkile ukuze akhuphele iimpapasho, izinto ezirekhodiweyo kunye neevidiyo kwiwebhsayithi yethu aze abonise nabanye abazalwana bamabandla asekuhlaleni. Eli lungiselelo liye laphumelela.
IHolo YoBukumkani Ibaluleke Ngaphezu Kweselfowuni
UTeona, oneminyaka eyi-10 kunye nosisi wakhe oneminyaka esibhozo uTamuna, bahlala kwiRiphabhliki yaseGeorgia. La mantombazana ayefuna iselfowuni. Umakhulu wawo wawathembisa ukuba uza kuwahlephulela kumrholo wakhe nyanga nganye ukuze akwazi ukuyithenga. Okubuhlungu kukuba umakhulu wasweleka ngesiquphe. Nakuba kunjalo, intsapho yawanika umrholo wokugqibela kamakhulu ukuze akwazi ukuthenga iselfowuni. Emva kokuba ecingisisile ngale nto, la mantombazana abhalela ibandla lawo esithi: “Siyazi ukuba kwiiveki ezimbini ezizayo kuza kwakhiwa iHolo yoBukumkani kwilali yethu iT’erjola. Umakhulu wethu ebefuna nyhani ukuncedisa xa kusakhiwa, ngoko ke, sicinge ukuba inkamnkam yakhe yokugqibela siyise ebandleni kunokuba sithenge iselfowuni. Sicela nisakhele iHolo yoBukumkani entle!”
IZibhalo ZesiGrike NgesiTetum
NgoJanuwari 17, 2014, eDili, eTimor-Leste, uGeoffrey Jackson welungu leQumrhu Elilawulayo wakhulula iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo ZamaKristu ZesiGrike ngesiTetum, olona lwimi luthethwayo kwelo lizwe. Ngaphambili, iBhayibhile yeZibhalo ZesiGrike yayishicilelwa ize isasazwe yiCawa yamaKatolika, eyayingafuni ukuyithengisela amaNgqina kaYehova okanye abantu ekucingwa ukuba bafunda namaNgqina. Noko ke, inguqulelo yamaKatolika yayinezinto ezininzi ezingachananga, ezishiyiweyo, isebenzisa amagama akudala yaye indlela eprintwe ngayo inengxaki. Ngokwahlukileyo koko, ethetha ngeNguqulelo Yehlabathi Elitsha, uDarren, ongumvangeli eTimor-Leste wathi: “Uninzi lwabantu balapha eTimor-Leste abafunda iNguqulelo Yehlabathi Elitsha bayayithanda kuba ichanile yaye sebecela ezabo. Bathi ifundeka kamnandi yaye bayayithanda le inamagama amakhulu kuba amakhaya amaninzi anoofinyafuthi. Ngoku abaninzi abaye bazifumana bayazifunda.”
EMakedoni: Bashumayela ngeencwadi zesiRomany
NgoJanuwari 2014, umsebenzi wokuguqulela wesiRomany esithethwa eMakedoni wenze imbali. Kwasekwa iqela labaguquleli kwaza kwanconyelwa ukuba kuguqulelwe iincwadi kungekuphela ngolo lwimi kodwa nangesiCyrillic. Oku kubancede kakhulu abantu abathetha isiRomany abasiqhele kakhulu isiCyrillic, esiyindlela ekubhalwa ngayo eMakedoni.
Uninzi lwabantu abathetha isiRomany bayithanda kakhulu into yokuba intlangano kaYehova ineencwadi zolwimi lwabo. Omnye udade wathi: “Ekubeni ndithetha isiRomany, abantu bezinye ilwimi basoloko bendijongela phantsi, ngenxa yoko ndiyambulela uYehova ngokundibona ndikufanelekele ukufumana iincwadi ngolwimi lwam. Oku kundisondeza nangakumbi kuye.”
“Ndiyambulela uYehova ngokundibona ndikufanelekele ukufumana iincwadi ngolwimi lwam”
Ukuba Phantsi Kwelinye Isebe
Ukususela ngoFebruwari 1, 2014, iofisi yesebe eseMerika iye yavelela intsimi namabandla aseJamaica nakwiCayman Islands. Asinamazwi okuyichaza indlela abamanyene ngayo abavakalisi abangaphezu kwe-1.2 ezigidi abakwintsimi yesebe laseMerika! Eli nani liquka amaphondo aseMerika ayi-50, iBahamas, iBermuda, iBritish ne-U.S. Virgin Islands, iPuerto Rico neTurks and Caicos Islands.
Abazalwana noodade baseJapan basaqhubeka bebonisa umoya wobuvulindlela yaye inani loovulindlela abathe ngxi apha likwindawo yesine ukuba likhulu ehlabathini. Ekuqaleni konyaka wenkonzo ka-2014, kuye kwakho oovulindlela abayi-2 646, nto leyo ebangele ukuba babeyi-65 668 oovulindlela kweli. NgoMatshi 2014, bangaphezu kwesiqingatha abavakalisi abaye baba ngoovulindlela.